Diyaarado Kuwa Xamuulka Qaada ah oo kadagay magaaladda Baydhabo Sabab ? | All idamaale News
Diyaarado Kuwa Xamuulka Qaada ah oo kadagay magaaladda Baydhabo Sabab ?
Sida ay inoo xaqiijiyeen Illo wareed lagu kal soonaan karo Diyaarado waaweeyn oo ah kuwa xamuulka qaado ayaa ka degay Magaalooyinka Kismaayo iyo Beydhabo ee Xarmaha KMG Maamulada Jubbaland iyo K/galbeed.
Diyaaradaha ayaa waxaa ay sideen sida naloo xaqiijiyay Hub badan kuwaas oo labadaasi Magaalo lagu dejiyay, waxaana Hubka la wareegay Ciidamada Ethiopia.
Hubka ayaa isugu jira Midka fudud iyo Qoryaha Culus waxaana intii ay garoonka joogeen Diyaarada oo laga dejinayey xamuulka Xubka ah Ciidamada Ethiopia ay joojiyeen Dhaq dhaqaayadii caadiga aha ee ka dhax socday Garoomadaasi.
Dawlada Itoobiya ayaa horay la aaminsan yahay in Hub badan u geysay Magaalooyinkaasi taasi oo laga cabsiqo inay saameyn ku reebto dadka deegan qaar, waxaana jira walaac ku aadan hubkan Itoobiya ay siineyso maamul goboleedyada dalka.